Inqubomgomo yethu ihlala izinsuku eziyi-14 kusukela ngosuku lokuthenga;
Ukubuyiselwa kwe-B2B ngenxa yamakhasimende okuthengwe ngephutha kungabuyiselwa (kungakhokhiswa imali yokuphatha engekho ngaphansi kuka-15%) kepha AKEKHO ukubuyiselwa kwemali. Ikhasimende lizothola isikweletu ku-akhawunti yalo elingadonsela umkhiqizo kulo noma iklayenti lingasicela ukuthi siyithengisele leyo mikhiqizo ngemali ekhokhisiwe.
NB: Ama-oda akhethekile lapho sithole khona izinto ezingezona ezesitoko futhi noma silethe isitoko esengeziwe ngobuningi egameni lamakhasimende, angeke abuyiselwe noma anikezwe ..
Uma unganelisekile ngokuphelele ngezimpahla zakho zokuthenga zingabuyiselwa esikhathini sokubuyisa ukubuyiselwa imali noma ukushintshaniswa.
Uma kudlule izinsuku eziyi-14 uthenge, ngeshwa asikwazi ukukunikeza imbuyiselo noma ukushintshaniswa.
Ukuze ufanelekele ukubuyiselwa imali, into yakho kufanele ingasetshenziswa futhi ibe esimeni esifanayo naleso oyitholile. Kumele futhi kube kuphakeji lokuqala.
Izinhlobo eziningana zezimpahla zikhululiwe ekubuyisweni isb. Izimpahla ezingabhubha azikwazi ukubuyiselwa.
Ukuqedela ukubuya kwakho, sidinga irisidi noma ubufakazi bokuthenga.
Kunezimo ezithile lapho kunikezwa kuphela ukubuyiselwa kwemali okuyingxenye: (uma kusebenza) izinto ezinezimpawu ezisobala zokusebenzisa
Noma iyiphi into engekho esimweni sayo sokuqala, ilimele noma ilahlekile izingxenye ngezizathu ezingekho ngenxa yephutha lethu.
Noma iyiphi into ebuyiswa ngaphezu kwezinsuku eziyi-14 ngemuva kokulethwa noma ukuqoqwa
Ukubuyiselwa kwemali (uma kusebenza)
Lapho ukubuyiswa kwakho sekutholakele futhi kwahlolwa, sizokuthumela i-imeyili ukukwazisa ukuthi siyitholile into yakho ebuyisiwe. Sizokwazisa futhi ngokugunyazwa noma ukwenqatshwa kwemali yakho ebuyiswayo.
Uma uvunyelwe, kuzobuyiselwa imali yakho, bese kuthi isikweletu sizosetshenziswa ngokuzenzakalela ekhadini lakho lesikweletu noma endleleni yokukhokha yangempela, zingakapheli izinsuku ezingama-20 zokusebenza.
Ukubuyiselwa kwemali emuva kwesikhathi noma okungekho (uma kusebenza)
Uma ungakayitholi imbuyiselo okwamanje, qala uhlole i-akhawunti yakho yasebhange futhi.
Bese uthintane nenkampani yakho yekhadi lesikweletu, kungathatha isikhashana ngaphambi kokuthi ukubuyiselwa kwemali kwakho kuthunyelwe ngokusemthethweni.
Okulandelayo thintana nebhange lakho. Kukaningi kuba nesikhathi sokucubungula ngaphambi kokuthi kubuyiselwe imali.
Uma ukwenzile konke lokhu futhi ungakayitholi imbuyiselo yakho, sicela uxhumane nathi ku- sales1@cleaninghub.co.za
Izinto zokuthengisa (uma zikhona)
Izinto ezibiza intengo ezijwayelekile kuphela ezingabuyiselwa imali, ngeshwa izinto zokuthengisa azikwazi ukubuyiselwa imali.
Sifaka kuphela izinto uma zingalungile noma zilimele. Uma udinga ukuyishintshanisa ngento efanayo, sithumele i-imeyili ku- sales@cleaninghub.co.za bese uthumela into yakho ku: Shop A7 Oriental City. Umgwaqo omdala waseJhb. ICenturion Pretoria RSA 1004.
Uma into imakwe njengesipho lapho ithengwa futhi yathunyelwa kuwe ngqo, uzothola isikweletu sesipho ngenani lembuyiselo yakho. Lapho into ebuyisiwe isitholakele, kuzothunyelwa kuwe isitifiketi sesipho.
Uma le nto ingamakiwe njengesipho lapho ithengwa, noma lowo okunikeze isipho ethunyelwe kuye i-oda lakhe ukuthi bakunike lona kamuva, sizothumela imbuyiselo kulowo onikeze isipho futhi uzokwazi mayelana nokubuya kwakho.
Ukubuyisa umkhiqizo wakho, kufanele uthumele umkhiqizo wakho ku: Thenga i-A7. Idolobha laseMpumalanga. Umgwaqo omdala waseJhb. ICenturion Pretoria ZA 1004
Uzoba nesibopho sokukhokhela izindleko zakho zokuthumela ngokubuyisa into yakho.
Izindleko zokuthumela azibuyiswa. Uma uthola imbuyiselo / isikweletu, noma yiziphi izindleko esingaba nazo ekuhanjisweni kokubuyisa zizodonswa embuyiselweni yakho.
Kuya ngokuthi uhlala kuphi, isikhathi esingathatha ukuthi umkhiqizo wakho oshintshiwe ufinyelele kuwe, ungahluka.
Uma uthumela into engaphezu kuka-R75, kufanele ucabangele ukusebenzisa isevisi yokuhambisa ngomkhondo noma ukuthenga umshuwalense wokuthumela. Asikuqinisekisi ukuthi sizoyithola into yakho ebuyisiwe.
Amaklayenti anesibopho sokuletha nokuqoqa okulandelayo kwanoma imuphi umshini / izimpahla ezibuyiselwe ngaphansi kwemigomo yethu yewaranti ku-Shop A7, e-Oriental City, eCenturion.